Kooxaha Bayern Munich,Wolfsburg,Dortmund iyo Hertha Berlin oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxaha Bayern Munich,Wolfsburg,Dortmund iyo Hertha Berlin oo Guulo Gaaray “SAWIRRO”
Kooxda Stuttgart ayaa waxaa Mercedes-Benz Arena 0-2 uga badiyay kooxda Bayern Munich.
Ciyaaryahan David Alaba ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Bayern Munich.
Kooxda Bayern Munich ayaana badin labadii kulan ee ugu danbeysay horyaalka Jarmalka ee Bundesliga.
Kooxda Bayern Munich ayaa gaartay guusheedii u horeysay ee horyaalka Jarmalka ee sanadka 2015.
Kooxda Bayern Munich ayaa horyaalka Jarmalka ku hogaamineyso 49-dhibcood,halka kooxda Stuttgart ay ugu hooseyso horyaalka.
Kooxda Wolfsburg ayaa garoonkeeda Volkswagen Arena 3-0 uga badisay kooxda Hoffenheim.
Kooxda Wolfsburg ayaa qeybtii hore ee ciyaarta labo gool dhalisay,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Bas Dost iyo Kevin de Bruyne,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Kevin de Bruyne ayaa qeybtii labaad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Wolfsburg.
Kooxda Wolfsburg ayaa kaalinta labaad uga jirto horyaalka talyaaniga ee Bundesliga,waxana ay leedahay 41-dhibcood,halka kooxda Hoffenheim ay horyaalka uga jirto kaalinta todobaad,iyadoo leh 26-dhibcood.
Kooxda SC Freiburg ayaa waxaa garoonkeeda Mage Solar Stadium 0-3 uga badiyay kooxda Borussia Dortmund.
Kooxda Borussia Dortmund ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii sagaalaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Marco Reus,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Pierre-Emerick Aubameyang ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta labo gool u dhaliyay kooxda Borussia Dortmund.
Kooxda Borussia Dortmund ayaa gaartay guusheedii u horeysay ilaa 5-tii bishii December ee sanadkii 2014.
Kooxaha Borussia Dortmund iyo Freiburg ayaa labaduba ka mid ah sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Mainz 05 ayaa waxaa garoonkeeda Coface Arena 0-2 uga badiyay kooxda Hertha Berlin.
Kooxda Herth Berlin ayaa qeybtii hore ee ciyaarta dhalisay labo gool,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Jens Hegeler iyo Roy Beerens.
Kooxda Hertha Berlin ayaa kala horeynta horyaalka Jarmalka uga jirto kaalinta 13-aad,waxana ay leedahay 21-dhibcood,halka kooxda Mainz ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 22-dhibcood.
Maamulka Gobolka Hiiraan Iyo Ciidamada Ammaanka Oo Kala Dhex galay Maleeshiyaad Ku Dagaalamay Beledweyne